धिरुभाई अम्बानीले कसरी खडा गरे अर्बौ डलरको साम्राज्य ? - Arthapage
धिरुभाई अम्बानीले कसरी खडा गरे अर्बौ डलरको साम्राज्य ?
प्रकाशित मितिः १७ श्रावण २०७७, शनिबार १५:३९ August 1, 2020
एजेन्सी, मुम्बइ । डलर अर्बपति अम्बानी परिवार अहिले विश्वको आकर्षणको केन्द्र भएको छ । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बइमा २७ तले अत्याधुनिक भवन, कहिले नसकिने अर्बौ डलर सम्पत्ति छ ।
पिता धिरुभाईको बाल्यकालको जीवन सामान्य थियो । सुरुमा फ्राइड फुड व्यापार गर्ने धिरुभाई पेट्रोलियम व्यवसायमा प्रवेश गरेर भारतमै नयाँ पृष्ठभुमी बनाए र साम्राज्य खडा गरे । एक व्यक्तिको उत्साहपूर्ण कथा जसले भारतमा हालसम्मकै सबै भन्दा ठुलो रिलायन्स इन्डष्ट्रिज लिमिटेड स्थापना गरे । जसको शक्तिशाली विरासत ९लिगेसी० लाई कहिले पनि विर्सन सकिन्न ।
गुजरातको चोरवाटमा सन १९३२ मा धिरुभाईको जन्म भएको थियो । उनीहरुको सामान्य जीवन थियो । धिरुभाईका पिता स्कुलका शिक्षक थिए । सानै उमेरदेखि धिरुभाई पैसा कसरी कमाउने भन्ने सोचमा थिए । उनले पैसा कमाउन स्कुलमा पढ्न छाडेर सडकमा कसरी व्यापार भइरहेको हेर्थे ।
धिरुभाई सातामा एकदिन भुजिया र फ्राइड फुड बिक्री गरेर पैसा कमाउन थाले । स्कुलको अध्ययन सकेपछि उनी ट्रान्स इन्टरनेसनल ट्रेडिङ फर्ममा कर्लकको रुपमा काम गर्न थाले । धिरुभाईले जागिरबाट कमाएको सबै पैसा जोगाएर गाउँ फर्केर आफनै व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाएका थिए ।
व्यवसायिक साम्राज्यको स्थापना
जागिरबाट कमाएका पैसा उनले पोलिस्टर आयात निर्यात कम्पनीमा लगाए । सफल हुँदै गएपछि उनको एकल प्रयासमा रिलायन्स कमर्शियल कर्पोरेशन स्थापना भयो । उनलाई व्यवसायबाट लाभ हुँदै गयो । परिवारसंगै उनी ४ वर्षसम्म फल्याट भाडामा लिएर बसेका थिए । त्यसपछि धिरुभाई अम्बानीको परिवार मुम्वइको दक्षिणमा रहेको चिरपरिचित अल्टामाउन्ड रोडको ठुलो घरमा सर्यो । आज त्यही २७ तले भव्य भवन बनेको छ । त्यहाँ जेठो छोरा मुकेश र नीता अम्बानी बस्छन ।
रिलायन्सले निष्कासन गरेको पहिलो प्राथमिक सेयर ९आईपीओ० मा ५० हजारले लगानी गरेका थिए । यसपछि अम्बानीको सम्पत्ति र पद रकेटको गतिमा बढ्यो । अम्बानी आउनुअघि भारतमा उद्योग व्यवसाय निजी घरनाको मात्र थियो । अर्थात, व्यक्तिगत मात्र थियो । कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी खुला उनैले गरे ।
धिरुभाइको आगमनले भारतीय बजारमा नयाँ युगको प्रवेश भयो । व्यवसायमा नैतिक मूल्य र मान्यताका साथै अध्यन र अनुसन्धानहरु हुन थाले । त्यसैकारण अम्बानीको कपडा र पेट्रोकेमिकल कम्पनी भारतलगायत विश्वकै पावरहाउस बनेका छन ।
उद्योग व्यवसायमा परिवर्तन गरेर अम्बानी भारतलगायत विश्वमै चर्चित बनेका थिए । उनको उत्साहले अझै व्यवसाय विस्तार गराइरहेको छ । धिरुभाईकी पत्नी कोकिलावेन अम्बानी भन्छिन ‘उनी लिजेन्ड बन्न जन्मिएका हुन, जसले सकरात्मक सोचका साथ व्यवसाय अघि बढायो ।’
सन २००२ मा स्ट्रोकबाट ७० वर्षको उमेरमा धिरुभाइको निधन भयो । उनको निधनबाट लाखौ भारतीय शोकमा डुवे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले भनेका थिए, ‘एउटा साधारण व्यक्तिले कसरी उद्यमशीलताको फायर खोल्यो त्यो आज प्रमाणित भएको छ । उनको निरन्तर लगनशीलताले जीवनभर सफलता प्राप्त गरे ।’
आजका दिनमा सबैको आँखा मुकेश र नीता अम्बानीमा छ । उनीहरुको सम्पत्ति बढेर ७७ अर्ब ४० करोड डलर पुगेको छ । उनीहरु विश्वको सर्वाधिक पाँचौ धनी भएका छन । रिलायन्स बजार पुँजीकरणमा विश्वको पहिलो कम्पनी हुने दौडमा छ ।
यता भाइ अनिल टाटपल्टिएका छन । रिलायन्स इन्फ्रस्टक्चर लिमिटेडले लिएको २८ अर्ब भार कर्जा तिर्न नसकेपछि यस बैंकले उनको मुम्बइस्थित धिरुभाई रिलायन्स सेन्टर कब्जा गरेको छ । धिरुभाइले पढाएको उधमशिलताको भावना र उनको नेतृत्वले गर्दा रिलायन्स इन्डष्ट्रिज आज सफलताको बाटोमा छ ।
प्रकाशित मितिः १७ श्रावण २०७७, शनिबार १५:३९ |
Prevकुन बैङ्कले कर्जामा कति लिन्छन् ब्याज ?
Next३२ वर्षपछि अघि बढ्यो कर्णालीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’